Atụmatụ banyere Open Spotify
Spotify a dịgasị iche iche music nchekwa data nke werewooro music gụgharia ezi kpọrọ. Ha nwere nnukwu ihe collection egwu nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị nka si a dịgasị iche iche nke genre. Nke a ngwa / n'elu ikpo okwu e too ọtụtụ na nwere oke ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ. Ọnụ ọgụgụ nke ụghalaahia akaụntụ nwere ike ewere dị ka ihe àmà nke ya ịga nke ọma. Ma ebe ọ bụ bụghị ihe niile zuru okè, Spotify a kọrọ na-ezute ụfọdụ oru (nnọọ ugboro ugboro).
Na-esonụ ederede na-elekwasị anya nke ugboro ugboro zutere okwu na ụfọdụ ngwọta na-nsogbu ndị ahụ.
Part 1.Login nke na Facebook
Part 2.Spotify mkpọka
Part 3.Account nke on Spotify
Part 4.Spotify bụ na-anọghị n'ịntanetị mode
Part 5.Spotify Playlist mbipụta
Part 6.Unable ka mmekọrịta offline listi ọkpụkpọ
Part 7.Spotify Web ahịa (ọkpụkpọ) mbipụta
1.Login nke na Facebook
Spotify bụ a ọzọ ngwa n'ihi na Facebook, si otú ọ na-achọ ikikere iji nweta nkọwa na-eji akaụntụ. Mgbe ụfọdụ, ọrụ igbochi ngwa na Facebook, na otú ahụ Spotify ọrụ ike i jiri Facebook akaụntụ maka nbanye ruo mgbe ikikere na-nyere.
Ngwọta: Nbanye gị Facebook akaụntụ, na-emeghe nzuzo mwube (na nri akuku wedaa menu). Site égwu na website ngalaba, aga dezie mwube, na họrọ Spotify na pịa on 'ịkpọghee' na-ekwe ka ohere maka ozi. Na mgbe ahụ ị na-ọma na-aga.
Spotify e kọọrọ ugboelu ugboro ugboro, ma ọ bụghị na-echegbu onwe ndị na-esonụ pụrụ inyere dozie nsogbu ahụ.
Wepụ niile Spotify cache na usoro faịlụ site na ngwaọrụ.
Download ma wụnye ngwa ọzọ
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ adịgide biko nyochaa version nke ngwa na gị ndakọrịta criterion. Ọzọkwa, hụ na ngwaọrụ nwere zuru ezu free ohere na Ram na-akwado ngwa ibu.
3.Account nke on Spotify
Ọ bụrụ na ị na-ezute nsogbu na Spotify na akaụntụ, na ị kwụrụ maka adịchaghị na akaụntụ ma ike ịnweta ozi, biko hụ ndị na-esonụ
Mgbe ụfọdụ ọrụ na-ewe oge imelite na nchekwa data. Chere ruo oge ụfọdụ ma gbalịa ọzọ.
Biko ego na akaụntụ i aha. Eleghi anya, i nwere free akaụntụ site na akaụntụ email gị, mgbe ndị otu na-tụrụ ụtụ na Facebook nbanye. Biko recheck akaụntụ na azụmahịa nkọwa ..
Mgbe ụfọdụ ụfọdụ ọrụ na-adịghị inweta n'ebe ụfọdụ, nke a pụtara na ọ bụ ezie na ị bụ onye na aha so, ma ị na-arụ ọrụ na ụfọdụ ndị ọzọ obodo mpaghara ebe ọrụ ndị bụ adịghị. Biko hụ na ọrụ dị maka ojiji.
4.Spotify bụ na-anọghị n'ịntanetị mode
Mgbe ị jiri ngwa, mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ghara mmekọrịta gị na egwu ma ọ bụ na-ege ntị ọhụrụ songs na ndị ọzọ. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ị na-eji offline ọrụ.
Iji ọrụ hụ na i na-arụ ọrụ na online mode. Ọ bụrụ na ngwa ka mụ na offline mode, ego netwọk njikọ. Disconnecting na reconnecting nwere ike dozie nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na nsogbu adịgide, iwepụ ngwa na reinstall ya na ngwaọrụ.
5.Spotify Playlist mbipụta
Mgbe ụfọdụ ị pụrụ enwe ike ịnweta ndepụta ọkpụkpọ gị ma ọ bụ egwu adịghị egwu kwesịrị ekwesị. Ọrụ nwere na-kọrọ nsogbu ndị dị ka ha na-apụghị ikwu tracks ma ọ bụ ịgbanwe site na otu playlist ndị ọzọ. Nke a pụrụ ịkpọ dị ka glitch ma ọ bụ nwere ike ịbụ n'ihi na nke ụka n'Ịntanet njehie na usoro.
Iji dozie nsogbu ego gị netwọk njikọ. Ị nwere ike na-agbalị ịmanye kwụsị ngwa na-agba ọsọ ọzọ. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ adịgide reinstallation bụ ihe ngwọta kasị mma maka nsogbu
6.Unable ka mmekọrịta offline listi ọkpụkpọ
Mgbe ụfọdụ ọrụ na-enweghị ka mmekọrịta offline ndetuta egwu ọkpụkpọ ka ha ngwaọrụ. E nwere ụfọdụ kwere omume mere nke a:
Ngwaọrụ ke offline mode (dịghị-arụsi ọrụ ike internet connection)
Ngwaọrụ enwereghị ezuru free ohere chọrọ iji chekwaa faịlụ
Onye ọrụ na-egosipụta na 3.333 songs kwa ngwaọrụ ịgba.
7.Spotify Web ahịa (ọkpụkpọ) mbipụta
Spotify ndị ọrụ na-enwe ọrụ ha n'elu desktop ma ọ bụ laptọọpụ, na-eji ọrụ site na iji na weebụ ahịa (music Player). Ma, mgbe ụfọdụ ha na-apụghị eji ọrụ maka ụfọdụ ihe. The music listi ọkpụkpọ adịghị imelite, ha na mpaghara faịlụ mmekọrịta na ngwa, ma ọ bụ ha na-apụghị ịnweta Spotify netwọk.
Iji hụ na ị na-adịghị enwe ụdị nsogbu biko ego:
1. The kuki nwere ike ịzọpụta na ngwaọrụ na firewall enyem nweta Spotify netwọk.
2. Ị nwere ike netwọk njikọ.
3. System chọrọ na-adịkwa na version nke ngwa
4. The ọkpụkpọ nwere ikike iwu ka ịnweta Spotify ọrụ
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ adịgide, na-agbalị reinstalling ngwa na wepụ ochie echichi faịlụ nke ahịa.
Ndị a bụ ụfọdụ nke ugboro ugboro nwere nsogbu maka Spotify. The Spotify otu e idozi nsogbu inye continuity ha ahịa ma hụ na afọ ojuju na-iji nọgide ha azụmahịa na ahịa. The n'elu kwuru banyere mbipụta na ha kwekọrọ ekwekọ ngwọta enyeworo ọtụtụ ọrụ. Ma nsogbu gị nwere ike ma ọ dakọtara criterion, biko nyochaa nke na gaba ya.
> Resource> Spotify> Atụmatụ banyere Open Spotify - Issues